यहोशु किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू
वेल्श फुटबल खेलाडीहरू
बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू
क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू
डेनिश फुटबल खेलाडीहरू
डच फुटबल खेलाडीहरू
फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू
जर्मन फुटबल खेलाडीहरू
इटालियन फुटबल खेलाडीहरू
पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू
स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू
घानियन फुटबल खेलाडीहरू
आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू
नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू
सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू
अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू
ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू
कोलम्बियाई फुटबल खेलाडीहरु
उरुग्वे फुटबल खेलाडीहरू
क्यानाडाई फुटबल खेलाडीहरू
सबैअंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरूवेल्श फुटबल खेलाडीहरू
एब्रेची ईज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डीन हेंडरसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सबैबेल्जियम फुटबल खेलाडीहरूक्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरूडेनिश फुटबल खेलाडीहरूडच फुटबल खेलाडीहरूफ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरूजर्मन फुटबल खेलाडीहरूइटालियन फुटबल खेलाडीहरूपोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरूस्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू
फ्लोरन्टिनो लुइस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
राफेल गुरेरो बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मार्कस थोरम बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Yacine Adli बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
सबैघानियन फुटबल खेलाडीहरूआइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरूनाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरूसेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हबीब डायललो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जोर्डन आइव्यू बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
इस्माइला सर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
सबैअर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरूब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरूकोलम्बियाई फुटबल खेलाडीहरुउरुग्वे फुटबल खेलाडीहरू
एन्जिल कोरिया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
डुवान जपाटा बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
पापु गोमेज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सबैक्यानाडाई फुटबल खेलाडीहरू
जोनाथन डेभिड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
उत्तर अमेरिकी एसोसोर स्टोरीहरू
जियोवन्नी रेना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ईसाई Pulisic बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एशियाई फुटबल स्टोरीहरू
ली कang्ग-इन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Faiq Bolkiah बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
Takumi Minamino बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
क्यागलर सोयुनु बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
टेकफुस कुबो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ओशियानिया फुटबल स्टोरीहरू
माइल जेडेनक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
हारून Mooy बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
टिम Cahill बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
मंगोलियामा नेपाली महिलाको मृत्यु
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू यहोशु किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको अप्रिल 15, 2020
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सर्वनाम उपनामद्वारा जान्छ; "Mr Versatile"। हाम्रो यहोशू किमिमच बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्म उनीहरूको बचपनको समय सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ-पिच तथ्याङ्कहरू पहिले नै उनको बारेमा चिन्ता भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको पिच सामरिक बुद्धिको बारेमा जान्दछन्। तथापि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू यहोशु किममिचको बायोको बारे धेरै जान्दछन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
जोशू वाल्टर किमिम जर्मनीको रोटीवेलमा 8 को 1995th दिनको जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, अन्जा किममिच र बुबा जन्मेको बिरोल्ड किममिचमा जन्मिए।
यहोशु किमिमिचले शर्मीला र शानको जन्म भएको थियो, तर अर्कोतर्फ, तिनका आमाबाबुले देखाएको रूपमा सनकी र ऊर्जावान हुन सक्छ। आदर्श रूप मा, उनको बचपन को जीवन को समयमा एक धुंधला शुरू भयो। किममिच बोसोङको सानो गाउँमा हुर्केकी थिई, जो ब्ल्याक वन र बेडेन-वर्तटेम्बर्गको राजधानी स्टटगार्टको बीचमा रहेको छ। Bösingen एक ठेठ ग्रामीण गाँउ हो जहाँ खाली बच्चाहरु को लागि खालीपन समाप्त हुन्छ जब हरेक साना केटाहरु को खुट्टा मा फुटबल छ। 1,700 बासिन्दाहरू र गाईको अन्य केटाकेटीहरूसँग तुलनामा, फुटबल किमिमको लागि नियमित शौक बने।
त्यसपछि पछि, किममिचले आफ्नो घर बगैंचा र पछाडीको किनारमा अभ्यास गर्थे। उनले गरे कि, एक र त्यसपछि धेरै विन्डोहरू उनको बाटोमा फुटबल किक्सनबाट झरिरहेका हुनेछन्। आश्चर्यजनक कुरा, तिनका आमाबाबुले आफ्नो छोरा विनाशकारीको बारेमा कहिल्यै चिन्ता गर्नुभएन, उनीहरूले आफ्नो छोरा र तिनका साथीहरूसँग बिस्तारै हरेक एक टुक्राको टुक्रालाई बदल्दा वैकल्पिक समाधान क्रमबद्ध गरे। किममिचले यसो भन्छिन्;
"एक दिन, म घर आइपुग्यो र अगाडिको वरिपरी दुई विनियम फुटबल गोलहरू फेला पर्यो,"
किममिचले भने PlayerStribune.
'स्थानीय फुटबल क्लबले तिनीहरूलाई अब चाहिँदैन, र मेरो आमाबाबुले उनीहरूको हातको हात समातेका थिए। मेरो बुबाले सडकमा अप्रयुक्त निजी भूमिको साजिशलाई संकेत गर्नुभयो र मलाई र मेरो साथीहरूलाई भन्नुभयो; केटा, त्यहाँ जानुहोस् र आफ्नो फुटबल को लागि दुश्मन !! !! '
यहोशु किमिमिकले नयाँ पार्कमा आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्दै आफ्नो जीवनमा नयाँ अध्याय खोल्यो। यसले तिनको महत्वाकांक्षाहरूलाई फुटबल बनाउदै केवल गुजर फैंसी. त्यसपछि पछि, किममिचले उनीहरूको केही प्रारम्भिक मूर्तिहरू समावेश गर्न खोजे; Zinedine Zidane, Bastian Schweinsteiger र टोमस रोकीकी। यो प्रतिकृति शर्टहरूको पछाडिको नामको मात्र तीन थिए। भूमिकाहरू हेर्दै यी मूर्खहरूले खेल्न सकेका थिए कि उनीहरूले एक-अर्कालाई मद्दत गर्न सक्छन् किममिकले क्षेत्रमा मान्न मन पराउँछन्।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियरमा सुरू गर्नुहोस्
फुटबलको किममिचको जुनूनले उनलाई स्थानीय युवा टोलीको रोस्टरमा नामांकन गर्यो, जसले उनलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न चरण दिए। एक परिभाषित क्षण आयो जब टीम स्टटगार्ट को युवा टीम को विरुद्ध खेले।
"स्थानीय क्लब क्लब थियो धेरै अन्य पेशेवर खेलाडिहरूले आफ्नो सुरुवात गरेको थियो,"
किममिचले सम्झना र निरन्तर ...
"स्टटगार्ट युवा समुहका साथ म्याचको दौडान मैले उनीहरूको विरुद्धमा तीन गोल गरे र हामीले 3-2 जित्यौं।"
यो साँच्चिकै राम्रो तरिकाले ध्यान पाउने तरिका थिएन। स्टेडियम पछि तुरुन्तै स्टटलगार्ट सहित स्काउटहरू स्टिमगार्टले बाटोको बाटोमा आफ्नो हस्ताक्षर प्राप्त गर्न किममिचको छेउमा किमिमिच घुमाउन थाले। किमिमको आमाबाबुको लागि अन्तिम निर्णय छोडियो। तिनीहरूले सुरुमा तिनको लागि निमन्त्रणालाई स्टटगार्टसँग प्रशिक्षण सुरु गर्न इन्कार गरे। श्री र श्रीमती बर्थथोल्ड किमिमले आफ्नो मन परिवर्तन गरेपछि क्लबको युवा टीम कोचले उनीहरूलाई राजीनामा दिनको लागि व्यक्तिगत भ्रमण गरे।
धेरै हप्ता बिताउन धेरै हप्तासम्म स्टटगार्टबाट यात्रा गर्दा, कमिचले फुटबलको संसारमा आफ्नो पहिलो वास्तविक पछाडि लाग्न थाले जब उनी स्टन्टगार्टको अकादमीमा मात्र एक 18 वार्षिक भर्तीको रूपमा स्वागत गरे।
किममिच, एक मित्र संग, सबै भन्दा कानुनी नयाँ सदस्य थिए VfB स्टटगार्ट युवा टोली। क्लबमा, उहाँले सबै म्यानुअल कार्यहरू दिनुभएको थियो तर कहिल्यै गल्ती थिएन। Aउनको युवा क्यारियर को माध्यम ले, त्यो उनको प्रशिक्षण पिच छोडने को लागि आखिरी एक को रूप मा जाना जान्छ, निर्धारण को एक संकेत हो कि त्यो यसलाई बनाउछ। यो चित्रले उनीहरूलाई आफ्नो टोलीको रैंकमा सुधार र पार गर्यो। तथापि, यो किमिच पहिले लामो समय लागेन उनको निर्धारित चरित्रको लागी एक बहुमुखी आयाम खेल को विकास गर्यो।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सेट ब्याक र बिग ब्रेक
एक दुखाइ क्षण किमिमको लागि आयो जब कोचले उनलाई बायाँ क्लबमा ठूलो मौका पाएनन्।
किममिचको द्रुत विकासले आफ्नो युवा क्लबको लागि बहुमुखी प्रदर्शनहरूसँग जोड दिएका छिट्टै उनलाई युवाहरूलाई एक वरिष्ठ खेलाडीलाई ट्राफिक रूपमा देखाउँदै देखाए। दुर्भाग्यवश, उनले एक प्रमुख सेट फिर्ता गरे। किममिचले आफैलाई उन्नतिको रूपमा देखाए र सबै जवान रङ्गीनले खेल खेल्न अनुरोध गरे VfB स्टटगार्ट वरिष्ठ टोली। उहाँको अनुरोध अस्वीकार भइरहेको उनले धेरै पीडा ल्याए। उनको स्टटगार्ट युवा युवा कोचको अनुसार।
'तपाईं पर्याप्त राम्रो हुनुहुन्न, तपाईंको शरीर पर्याप्त बलियो छैन,'
नयाँ कोचले उनलाई भने, उनीलाई अर्को वर्षको लागि VfB स्टटगार्ट युवा युवा टोलीको साथ आवश्यक छ। किममिकले एक पटक सम्झना गरे कि निर्णयले उसलाई चोट पुर्याउने प्रयास गरिसकेको भए पनि उनीहरुलाई हल्लायो।
सहरको मूडमा बाँचेको सट्टा, जवान किमिमले सान्त्वना पाए। उहाँले आफ्नो भाग्य खोज्न निर्णय गरेर बलियो बनाउनुभयो। सौभाग्य देखि, यो यति भयो कि उनको प्रिय पूर्व युवा कोच जसले उनलाई स्टटगार्टमा लुटेको थियो पछि देखि आरबी लेपिज्ग, र उनले उहाँलाई चाहन्थे। किममिच एकपटक फेरि फर्कायो ...
"मैले सोधेँ, मलाई यो मौका छ र मैले यो लिनु पर्छ !!!"
लेपिज्गमा, उनी एक अत्यन्त आक्रमणकारी मनसाय टोलीको भागमा थिए जसमा उनको ब्याक-विजेता गुणहरू एक उच्च पछाडि चार पछाडिको स्वरमा अगाडि उभिए।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पीप टक
आफ्नो जवान उमेर मा उनको प्रभुत्व को कारण, कममिच संग 2015 मा बायर्न संग एक अवसर को मौका मिल्यो Guardiola आफ्नो स्थानान्तरण व्यक्तित्व मार्फत हेर्दै। बैठकको विवरणमा पीपKimmich ले भन्यो ...
"म बायर्नका कार्यालयहरूमा पेन्ग गार्डियोला भेट्नको लागि कन्फिगरेसन रूममा बसें। मैले पेपको बारेमा थाहा पाएको थिएँ मैले टिभीमा देखेको थिएँ। म धेरै नम्र थिए, तर उहाँले हिंड्नु भएको रूपमा, मैले यो तुरुन्तै महसुस गरे - त्यो भरोसा। अनि तुरुन्त मलाई थाहा थियो: म बायर्नको लागि खेल्न चाहन्छु। पीपले मेरो बल र मेरो कमजोरीहरूको बारेमा मलाई बोलायो, ​​र उनीहरु मलाई कसरी फरक खेल खेल्ने एक राम्रो खेलाडी हुन मद्दत गर्न चाहन्थे। 'म तिमीलाई यो टीममा चाहन्छु,' उनले मलाई भने। त्यो क्षण छ म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन। त्यसोभए, उहाँ मलाई एक बुबाको रूपमा बन्नुभयो। "
बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटबलको तनावको सामना गर्दै पिचबाट जीवनशैली सिर्जना गर्ने किमिमको एक पूर्ण तस्वीर बनाउँछ। तल चित्रित लिना मेयर्ससँगको सम्बन्धले आफैंलाई सुखी जीवन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
लिना Bad Bevensen, जर्मनीको लोअर सक्सनीमा जिल्ला उलज्जनको एक शहरमा जन्मिएको थियो। उनले विश्वविद्यालयमा कानून अध्ययन गरे। किममिचले आफ्नो सुन्दर प्रेमिका लिना मेयियरलाई भेट्टाएपछि उनले आरबी लीपेजिगका लागि खेलेका थिए जहाँ उनले काम गरे। तिनीहरू दुबै राम्रो मित्रको रूपमा सुरू गरे र पछि प्रेमी भए।
किममिचको फुटबल र दृढतालाई सफलतापूर्वक निरन्तरतापूर्वक लिना द्वारा सजिलै भरिएको छ। तलका दुवै प्रेमीहरूलाई हेरेर, फ्यानहरूले यो विश्वास गर्थे कि लिना मेयेर तिनको प्रेमीको भन्दा तीन वर्ष भन्दा पुरानो हुन्छ।
उनको सुन्दरताको लागि धन्यवाद, लिना जर्मनी WAGs को बीच एक मनपर्ने भएको छ।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
यहोशु किममिच आमाबाबुहरु: तलका किममिचको गर्भपतन आमाबाबु अन्जा र बर्थोल्डको लागि उनको छोराको अवार्ड राईटमा Rottweil जिल्लामा सबैभन्दा लोकप्रिय एथलीटहरू, तिनीहरूको घरको शहर।
यहोशु किमिमिचको बुबा बर्थोल्डले एक पटक जर्मन शौकिया फुटबल खेलाए। Berthold वर्तमान मा दक्षिणपश्चिमी जर्मनी, Rottweil नजिकै Bösingen मा आफ्नो पत्नी अंजा (किमिमिच मा) संग रहन्छ। उहाँ आफ्ना पितालाई उद्धार गर्ने पिताको लागि श्रेय दिइयो "पे टक" यसरी उनको छोरालाई अझ साहसी र उत्साही बनाइदिन्छ। यो तल देखेको जस्तो दर्शकहरूको मनोरञ्जनमा गरेको छ।
आमाबाबु दुवै विशेष रूपले उनको माम, अन्जा किमिचिकले आफ्नो छोरालाई फुटबल प्रतिबद्धताका लागि प्रत्येक पटक बढी छुट्याउँछ। आमा र छोरा दुवै सम्बन्ध एल्लेलोङ्ग जस्तो छ जुन तल चित्रमा देखाइएको छ।
फोनमा यहोशूसँग अनजाले कुराकानी। छलफलमा धेरै कुराले इन्जाले आफ्ना छोराका निर्देशनहरू र खाना पकाउने सुझावहरू दिन्छन्। उनी आफ्नो छोरा 'यहोशू' नामक जिम्मेवारी पाउँछन् जुन बाइबलको पुरानो करारबाट मोशाको सेवक हो।
यहोशू किममिचकी बहिनी: उनको आमाबाबुले तिनलाई धेरै टाढा बस्दा डेबरा यहोशू तिनकी बहिनी निकै नजिकिन्छन्। डेबरा म्युनिखमा आफ्नो भाइले भाडामा लिएको एक साझा फ्लैटमा जीवन बिताउँछ।2वर्ष पहिलेको रूपमा, डेबोरा म्यूनिखमा एक स्नातक छात्र थियो। उनी आफ्नो भाई फुटबल क्यारियर मा केहि बिंदु मा आफ्नो शिक्षा अझ बढी चाहन्छ कि कारण हो।
किममिचले ग्रेड 1.7 सँग स्नातक गरे। फुटबलको अलावा, किममिचले आफ्नो क्यारियरमा केही बिन्दुमा अधिग्रहण व्यवसाय प्रशासन अध्ययन गर्न चाहन्छ। तिनको बहिनी डेबराको सुन्दर, गोलो लामो कपाल र एक राम्रो-न्यानो शरीरको रूपमा चिनिन्छ। उनी सधैं आफ्नो भाइलाई समर्थन गरिरहेका खडामा छ।
UNCLE: यहोशु किमिमिचसँग एक चाचा छ जो वाल्टरको नाम हो जसले जस्तै उहाँलाई परिवारमा एक तारा पनि छ। ब्यान्ड संग "Brillant ", वाल्टर एक सफल पप गायक हो।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत तथ्यहरू
फुटबलका सहयोगीहरू, उनको अर्को शौक हो "टेनिस"। उनको मनपर्ने भोजन स्पाटाजले छ र उसले टैटूलाई घृणा गर्दछ।
किममिच एक गहिरो विचारधारा र उच्च बौद्धिक व्यक्ति हो जसले अरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। उनी बिना पूर्वाग्रह देख्न सक्षम छन्, दुवै पक्षमा, जसले उसलाई कुनै पनि बनाउँछ जसले सजिलै समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ।
यद्यपि उनले सजिलै संग घनिष्ठ ऊर्जालाई अनुकूल गर्न सक्छन्। किममिचले एक्लै र सबै चीजबाट केही समयमै गहिरो आवश्यकता हुन सक्छ। यो उनी आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापना गर्न र क्यारियर प्रतिबिंब गर्न को लागी गर्दछ। उसले सम्भावनाको पूर्ण स्थानमा फुटबल पिचलाई हेर्छ।
किममिच पिचमा हरेक अवसरमा आफ्नो मन प्रयोग गर्दछ। उहाँसँग यो दर्शनीय गुण छ जुन भविष्यको बारेमा बुझ्न सक्षम छ किनभने उनको प्रदर्शनको सन्दर्भमा। जब उनी अकादमीमा थिए, उनीहरूले आफूलाई कुन कुराको माध्यमबाट हेर्नु आवश्यक पर्दछ।
जोशू किमिमच बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -फिलिप Lahm संग तुलना
पिचमा उनको स्थिति, क्लब र देश दुवैको लागि, बायर्न र जर्मनी लेबनान फिलिप लह्मसँग तुलना गरेको छ।
प्रशंसक तर्क गर्न सक्छ कि किमिमले आफ्नो पूर्ववर्ती भन्दा अगाडी बढि प्राकृतिक स्वाभाविक पद्धति छ। अगाडि बढ्दा किममिचको सामरिक खुफियाले डिफेंडरको तुलनात्मक रूपमा एक स्ट्राइकरको इज्जतको रूपमा जितेको थियो।
आचार्यको बावजूद, कममिचले आफूलाई Lahm तुलनाबाट आफूलाई प्रयास गर्न खोजेको छ, आफ्नो इच्छामा जोड दिए "आफ्नै बाटो जानुहोस्" आफ्नो क्यारियरमा। दुर्भाग्यवश उनको लागि, यो तुलनामा चाँडै बाहिर जान्छ जस्तो देखिन्छ किनभने यो उहाँको पक्षमा छ। अब यहाँ अन्य तुलनाहरू छन्;
केममिचले 71 बुन्डेर्नका लागि बन्डस्लिल्भा उपस्थितिमा सात गोल गरेका थिए जब लाहमले एक्सएनएनएमएक्सले एक्सएनएनएक्समा गोल गरे।
साथै उनीहरूलाई लम्म भन्दा ठूलो छ कि थिईन, किममिचले पनि 25 सातामा 2016 अवधारणाहरूमा जर्मनीको लागि तीन गोल गरेका छन्, जबकि लाहिमले 113 क्याप्सनमा5मा फैलिएको छ, लेहामले5मा एक्सएनएनएक्सएक्स क्याप्सन चलाए।
साधारण सारांश यो किमिम एक होइन Lahm तर एक Lahm-Müller हाइब्रिड। उहाँ साँच्चै एक हुनुहुन्छ "एक खेलाडीको स्वीकार्य स्विस सेना चाकू"।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो यहोशू किमिमच बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
बायर्न म्यूनिख फुटबल डायरी
आरबी लाइपजिग फुटबल डायरी
काई हाउट्ज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जोएल माटिप बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
थिलो किरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
सर्ज Gnabry बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
लियोन गोरटिज्का बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
त्यसो भए पनि यो कुरा हो
निकोस सुले बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
बर्नड लियोन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
शोकद्रेन Mustafi बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य
अन्ड्रे श्रुले बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जूलियन ब्रान्ड बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
टिमो वार्नर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 27
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 23
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 22
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 15
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 13
© प्रतिलिपि अधिकार © २०१-2016-२०२०
मारियो गोजे बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 15, २०२०
मारियो गोमेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्य
जेरोम Boateng बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्ध हो
टोनी कोरोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जुलियन ड्रेक्सलर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य